Ngwaahịa na ndị na - emepụta ngwaahịa - Ndị na-emepụta ngwaahịa China
KB Series emebi H-Typedị
Oghere firing nchedo usoro iji chebe akụkụ mgbe emebi breaker oghere
Auto-griiz Ngwaọrụ & mkpuchi mkpuchi
Ngwaọrụ valve swivel & mkpuchi mkpuchi
Nchịkwa mkpọtụ site na iji ngwa ejiri karịa mechie ọnụ
Breakaway mgbochi nke nkwụsị pin site-adịghị ahụ anya Ọdịdị nke ngwá ọrụ pin
Nnukwu teknụzụ jikọtara ya na ọdịdị mara mma
KB Series emebi V-ụdị
-Chịkwa mfe na mfe itinye ọnọdụ na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka ọrụ nsị.
Enweghị akụkụ-arọ, na-ebelata ọnụego nke chizul breakage.
Longer ngụkọta-ogologo na arọ ngụkọta arọ, adabara ụlọ-ebibi.
KB Series emebi S-ụdị
Obere mkpọtụ dị mma, ebe kwesịrị ekwesị maka ebe dị jụụ na ọrụ obodo.
Ihe nkwado mechiri emechi na-echebe isi ahụ.
TOR Series emebi H-ụdị
TOR usoro emebi V-ụdị
TOR Series emebi S-ụdị
1, Mechanical excavator wood capture: A na-ebugharị ya site na cylinder excavator, na-enweghị mgbakwunye hydraulic na pipelines;
2, 360 Celsius rotary hydcaị excavator osisi jidere: ọ dị mkpa ka ị gbakwunye usoro abụọ nke hydraulic valve blocks na pipelines na excavator iji chịkwaa;
3, Ngwunye osisi na-adịghị atụgharị osisi na-ejide osisi: Ọ dị mkpa ịgbakwunye otu setịpụrụ ngwongwo hydraulic na pipeline na excavator maka njikwa.
Odabara ebe dị iche iche arụ ọrụ. Enweghi ike iji ya rụọ ọrụ mmebi, dị ka mkpochapu nke ihe ọkụkụ, ihe eji emepụta ígwè na ebe a na-eji ígwè arụ ọrụ, kamakwa maka mgbake nke ihe ndị mejupụtara. Ọ bụ ezigbo mbibi akụrụngwa. Njirimara ya bụ mma na arụmọrụ ka elu. Mgbe a na-emegharị ma kpochapụ ya, a na-ebipụ ma kpokọta nnukwu iberibe, nke na-eme ka arụmọrụ dị mma ma na-ezere nchegbu ọrụ. O kwesịrị ekwesị ka nnukwu na ọkara-sized scrap imegharị ihe maka iji ụgbọ ọrụ na ọchịchị mgbibi arụmọrụ.
Ọ bụ ngwaọrụ dị n'ihu nke onye na-egwupụta ihe nke arụnyere na excavator, site n'enyemaka nke ike nke onye na-egwupụta ihe nyere, site na nchikota nke agba a na-agagharị agagharị na nke a na-agbatị agbatị nke nkịta iji mezuo mmetụta nke ịkụcha ihe . A na-ejikarị ya eme ihe na ụlọ ọrụ mmebi na ihe mkpofu ụlọ ọrụ. oge.
Ngwongwo ndị na-akụri ihe mejupụtara ya bụ pliers ahụ, haịlịnda haịdrọlik, agịga na-agagharị agagharị na agbatị agbatị. Ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-emepụta ihe bụ ezé agba, ezé, na ezé nkịtị. A rụnyere ya na excavator ma bụrụ nke mgbakwunye nke excavator.
A na-eji ụyọkọ ndọtị eme ihe n'ụzọ zuru oke na ụlọ ọrụ mmebi iwu . N'oge usoro mmebi ahụ, a na-etinye ya na excavator maka iji ya, nke mere na achọrọ naanị otu onye na-arụ ọrụ na-egwupụta ihe.
A na-etinye shears scrap na excavators ma ha kwesịrị maka gburugburu ọrụ ọrụ. Enwere ike iji ha maka ọrụ mkpofu, dị ka mkpofu nke ihe ọkụkụ, osisi nchara na ebe a na-arụ ọrụ nchara, enwere ike iji ya maka ịmegharị ihe ndị ọzọ. Ọ bụ zuru okè demolition nke akụrụngwa. Ihe e ji mara ya bụ nchekwa, ịdị mma na arụmọrụ dị elu. A na-emegharị ma kpochapụ ya ma kpochapụ nnukwu iberibe mpempe akwụkwọ, nke na-eme ka arụmọrụ dị mma ma na-ezere nsogbu nchekwa akwụkwọ ntuziaka. O kwesịrị ekwesị ka nnukwu na ọkara-sized scrap imegharị ihe maka iji ụgbọ ọrụ na ọchịchị mgbibi arụmọrụ.
Omume ọma jijiji bụ ụdị ọrụ inyeaka na-arụ ọrụ nke igwe ihe eji eme ihe, nke ejiri maka ụzọ, ọchịchị, nkwukọrịta, gas, mmiri, ụzọ ụgbọ oloko na ngalaba ndị ọzọ iji kọwaa ntọala injinia na azụ azụ azụ. Ọ kachasị mma maka compacting ihe nwere obere njigide na esemokwu n'etiti ahụ, dị ka aja aja, gravel na korota. Okpukpo nke oyi akwa na-ama jijiji buru ibu, na ogo nke mkpakọ nwere ike izute ihe achọrọ ntọala dị elu dịka awara awara.
Mkpọrọ Mkpọrọ Mkpọrọ, Crusher N'ihi Excavator, Pulverizer N'ihi Excavator, Control valvụ N'ihi emebi, Hb Series emebi, Shiee N'ihi Excavator,